Cockroaches मान्छे बाँचिरहेको घर वा अन्य स्थानमा लागि डरलाग्दो सपना परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। एक आसान काम - तपाईंले यी "छिमेकी" देख्दा तिनीहरूलाई लिन्छन्। को कीराहरू उपयुक्त अवस्था भएको कोठा कब्जा गरेपछि, आफ्नो नम्बर बढ्दै छ प्रगति ज्यामितीय। र तपाईं तिनीहरूलाई सही Cockroaches प्रकार निर्धारण भने मात्र प्राप्त गर्न सक्छन्।
अध्ययन को वर्ष
विज्ञान Cockroaches लगभग 5000 प्रजातिका अस्तित्व को थाह छ। को घरहरू र अपार्टमेन्ट तिनीहरूलाई को बारे मा 55 बाँच्न सक्छ, तर अक्सर हामी मात्र केही सामना गर्दै हुनुहुन्छ। ठूलो Cockroaches लगभग सबै डराउँछन्। र यो छैन अनौठो छ: यस्तो कीरा शायद सुखद छिमेकी बोलाउन सकिन्छ।
roaches उडान गर्न सक्नुहुन्छ? तिनीहरू पखेटा छ किनभने, मात्र केही प्रजाति मा कम गर्न सक्नुहुन्छ। कीरा उडान Cockroaches डराएका आतंक मानिसहरूलाई अझ बढी डर हुन्छ। प्रकृति मा, त्यहाँ स्वभाविक उडान गर्न सक्षम यी कीराहरू मात्र एक प्रजाति हो। तर, हाम्रो देशमा यो उत्पन्न गर्दैन। खैर! यो विश्वास छ ककरोच को हरेक दस वर्ष नयाँ प्रकारको छ।
कीराहरू जहाँ न्यानो र आर्द्र कोठा रुचाउँछु। यी प्राणीहरू को गतिविधि आफ्नो प्रारम्भिक पत्ता लगाउने रोक्छ जो रात, मा देखिन्छ। कीरा शरीर र विभिन्न लम्बाइ फरक 0.4 देखि 10 सेमी टाउको गर्न सक्नुहुन्छ -। dorsoventral दिशा मा चपटे एक त्रिकोण को रूप मा। प्रकार mouthparts र खोल्ने मुख काट तल छ।
कालो Cockroaches - सबै भन्दा साधारण। खाना तिनीहरूले खाना ताजा र खराब फारम सेवा गर्छन्। न्यानो जलवायु संग क्षेत्रमा पनि सडक बाँचिरहेका छौं। वास्तवमा, कालो Cockroaches लागि एक घर - यो केवल आफ्नो दायरा एउटा सानो अंश हो। र कालो ठूलो ककरोच को परिभाषा एकदम व्यापक छ। आफ्नो रंग कालो गर्न धनी खैरो देखि भिन्न हुन सक्छन्।
ककरोच यस प्रकारको को आयाम पनि फरक छ। "उच्च" शब्द disinfection विशेषज्ञ मा शाब्दिक (दस सेन्टिमिटर) लिएको छ। तथापि, वास्तविकता मा कीरा शरीर लम्बाइ महिलाहरुको3सेमी भन्दा बढी छैन। खैर, कोठा मा आफ्नो उपस्थिति - गरिब सरसफाई को एक चिन्ह। तिनीहरूले फोहोर, शौचालय र अन्य यस्तै स्थानहरू ट्यांक बाँचिरहेका छौं। यी प्राणीहरू धेरै रोगहरु को वाहक कुनै आश्चर्य छ। हरर Cockroaches को केवल एक उपस्थिति छ। फोटो कीराहरूको स्पष्ट प्रदर्शन गरिएको छ।
कपिश ककरोच को broadest वासस्थानमा संग प्रजाति मध्ये एक हो। सामान्य मा हामी प्रतीक पाउन। उहाँले बाँकी खाना छोडेर जहाँ तिनीहरूले व्यक्ति साथ दिनु।
समान रातो-haired र कालो Cockroaches संरचना। केवल पहिलो एक रातो-खैरो chitinous कवर संग एक लम्बी शरीर छ। लोकप्रिय नाम - ककरोच। घर को रातो प्रकार मानव Cockroaches सबैतिर चारै ओर।
अमेरिकी ककरोच को आकार चार सेन्टिमिटर हुन सक्छ। उनि लगभग सबै खान र उच्च प्रजनन छ। यो धेरै वृद्धि दर र बाँच्न क्षमता Tarakanova प्रतिनिधि गम्भीर यसको बारेमा कुरा गर्न बाध्य छन्।
अमेरिकी Cockroaches पनि छत मा, सबैतिर सार्न सक्छ। कीरा जोखिम संग शत्रु तत्काल एलर्जी पैदा, smelly तरल emits। यो Cockroaches को सम्पूर्ण परिवारको बीचमा लामो-बस्ने गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। आफ्नो घर मा यस पदार्थ को खोज तुरुन्तै आफ्नो हटाउनका लागि उपयुक्त सेवा सम्पर्क गर्नुहोस्। खाना पनि एक पाल्तु जनावर आक्रमण गर्न सक्छन् लागि संघर्ष अमेरिकी ककरोच! सहमत, यी प्राणीहरू - धेरै अप्रिय छिमेकी।
हामी Cockroaches सबैभन्दा चिरपरिचित प्रकार सूचीबद्ध छन्। अर्को, गरेको चकित वा आश्चर्य सक्छ सभामा ती कुरा गरौं।
यो बेचैनी पैदा तथापि, एक एकदम दुर्लभ घटना हो। उहाँले moulting समयमा carapace हालियो एउटा कीरा जस्तो देखिन्छ। chitin आवरण (पर्णपतन) को परिवर्तन ककरोच को जीवन को समयमा अप 8 पल्ट आउँछ। त्यसपछि यो एकदम हल्का, तर चाँडै पुन: chitin गठन गरिएको छ बन्नेछ।
Albinos पारदर्शी खोल endowed छन्। यो घटना पनि जनावर र बिरुवाहरु को अन्य प्रजातिहरु बीच पाइन्छ। यस्तो किरा रूपमा अन्य Cockroaches जस्तै - यो सम्झना albinos कि लायक छ। कति Cockroaches को प्रजाति ज्ञात वैज्ञानिक, भन्न ठ्याक्कै गाह्रो छ। अनुमानित संख्या - पाँच हजार, अन्य स्रोतबाट कुनै पनि कीरा हुन सक्छ 4.600 albinos मा नम्बर राखे।
घरमा के व्यक्तिहरूलाई प्राप्त?
छैन Cockroaches सबै प्रजाति घरमा प्राप्त गर्छन। तर एक घर रातो Cockroaches उतर भने, संघर्ष गंभीर हुनेछ। Cockroaches को प्रजनन पहिले नै संलग्न भएकाहरूलाई भाडादारों, आफ्नो prytkosti बारेमा सम्झना। यसलाई जहाँ बिल्कुल घरको कीराहरू penetrated बाहिर आंकडा गर्न कठिन छ। तर घर मा आफ्नो उपस्थिति लागि मुख्य कारण जानिन्छ:
धुन छैन लामो समय हो जो डुब्नु, मा फोहोर भाँडा;
शायद घर को बाहिर छ, जो खाद्य को remnants देखि मलबे;
पहिले नै Cockroaches बस्ने छिमेकी।
भोजन कोठा र क्याफेहरू नजिकै बस्ने ती मा किरा को वृद्धि जोखिम। जब Cockroaches अझै घर कामबाट ल्याए अवस्थामा छन्। कीरा aversive को रोकथाम को मुख्य माध्यम - घर (विशेष गरी भान्सा मा) मा सफाई कायम राखेर। पनि एक ककरोच चाँडै गुणन गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा पायो। खैर, यो पनि कीरा जोसका साथ घर को सफाई निगरानी गर्नेहरूलाई देखा कि हुन्छ।
विभिन्न प्रजातिका प्रजनन
Cockroaches जीवन चक्र को मूल ज्ञान उनको घटना रोक्न र अनावश्यक अतिथि विनाश सुविधा मदत। एक महिला 40 जवान व्यक्तिहरूलाई जन्म दिन सक्छ। आफ्नो नम्बर महिला द्वारा hatched को अन्डा मा लार्वा को संख्या, मा निर्भर गर्दछ। बाहिरबाट यो थप एक अन्डा बोरा जस्तो देखिन्छ। एक घर नस्ल वर्ष राउन्ड मा Cockroaches सबै प्रकारका।
आफ्नो जीवनकालमा, महिला अन्डा माथि4पटक गर्न कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग पार्छ। चिनाई यस्तो समस्या पत्ता लगाउन। यी प्राणीहरू को जीवन को अर्को सुविधा आफ्नो नातेदार खाना र पानी स्रोतहरु मा एक चिन्ह छोड्न आफ्नो क्षमता छ।
तर गाह्रो Cockroaches को प्रजाति को कुनै पनि छुटकारा गर्न। यो कार्य कहिले काँही छैन पनि महंगा औषधी सामना गर्न सक्षम थियो। तबाह गर्नेवाला तिनीहरूले समस्याग्रस्त नष्ट गर्न पर्याप्त हुनेछ, किनभने आफ्नो आवास यी प्राणीहरू को उपस्थिति बच्न निवारक उपाय लिन सल्लाह।
यी कीराहरू खाना बिगार्छ गर्न सक्ने राम्रो ज्ञात छ। सबैभन्दा मानिसहरू मात्र crumbs र स्क्रापहरू खान भन्ने विश्वास गर्छन्। वास्तवमा, Cockroaches पातलो खोल मा निहित खाना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पनि छाला को सामान, पुस्तक, फूल, कागज वालपेपरमा आक्रमण। excrement खाने व्यक्तिहरूलाई किरा सहित खतरनाक रोगहरु, को रोगजनकों बोक्न सक्छ। यस कारण यो घर को पर्खालहरु मा उनको घटना रोक्न सबै भन्दा राम्रो छ।
सायद तपाईं Cockroaches डायनासोर अघि अस्तित्व र वर्ष को धेरै हजारौं तिनीहरूलाई बाँचे कि मजाक सम्झना। यो मजाक मजाक को केवल एक अंश, र बाँकी, हाय, साँचो हो। Tarakanov notoptera को रहलपहल, को Paleozoic को sediments मा कीराहरू सबैभन्दा धेरै निशान संग, हो रहनेछ। Cockroaches धेरै राम्रो परिवर्तन अवस्था अनुकूल छन्। जीवन को लागि तिनीहरूले मात्र खाना र पानी चाहिन्छ।
जीवन खाना उपस्थिति निर्धारण गरिन्छ। Cockroaches विभिन्न प्रजाति आफ्नो जीवन बाँचिरहेका छौं। Cockroaches एक महिना खाना अप बाँच्न गर्न सक्नुहुन्छ, र कालो - 70 दिन सम्म। खाना scarcity मामलामा मान्छेको मासु खाने चलन फैलाउन छन्। र कहिलेकाहीं Cockroaches मान्छे दु: ख गर्न सक्नुहुन्छ।
यो तपाईं आश्चर्य हुन सक्छ, तर यी प्राणीहरू हराइरहेको टाउको संग जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ! को प्रयोग विचलता हो: अर्को केही हप्ता बस्न टाउको कीरा को deprived। यो संरचनात्मक सुविधाहरू कारण हो। तिनीहरूले सम्पूर्ण शरीर सतह सास फेर्न। शरीर स्नायु प्रणाली भर छरिएका आधारभूत reflexes कायम रहन्छ। तथापि, headless प्राणी लगभग अभिमुखीकरण संसारमा, सम्झना र सिक्न सक्ने छैनन् गुमाउन।
तिनीहरूले खाना वा पानी कमी हुँदा Cockroaches क्षति। स्पष्ट बाइट्स - जंगली आक्रमण को एक प्रकटीकरण, तर केवल एक तरिका बेपत्ता भोजन बनाउन र बच्न। यी निकायको क्षेत्रको सबैभन्दा प्रभावित छन्:
कुहिनो र गोडा bends, परेलिहरु, ओठ (कण खानको छाला);
आँखा र ओठ वरिपरिको छाला (सुत्दा महिला र बच्चाहरु को खानको);
को nasolabial गुना मा छाला।
को ककरोच क्षति याद - यो घृणित खराब र खतरनाक छ। ठाँउ छाला घाउ inflamed बन्न सक्छ। कहिलेकाहीं परजीवी द्वारा लगे एक संक्रमण घाउ मा प्राप्त गर्न सक्छन्। किरा कहिलेकाहीं छोराछोरीलाई निद्रामा परेलाहरु र eyebrows क्षति। अवस्थित छाला क्षति चोट लाग्नु।
Cockroaches त्यसपछि सक्छन् खान, को वसामय ग्रंथिहरु, र्याल र मलको स्राव। एकदम खतरनाक कुरा हो - यो Cockroaches बाइट्स भन्न सुरक्षित छ। क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा लगभग सधैं सुन्निएको र inflamed हुन्छन्।
केही मानिसहरू त्यहाँ ककरोच-खाने परेलाहरु को प्रकारको छ भन्ने विश्वास गर्छन्। व्यवहार मा, परिवारको लगभग सबै सदस्यहरू मानव शरीर hairlines खान सक्छ।
मान्छे प्राय Cockroaches एलर्जी अवलोकन। हावा, भोजन, प्रत्यक्ष सम्पर्क: Allergens विभिन्न तरिकामा भित्र पस्नु। डाक्टर अनुसार, अस्थमा संग विरामीहरु को बहुमत Cockroaches गर्न एलर्जी उजागर गरिएको छ। यो रोग को नतिजा धेरै फरक हुन सक्छ:
किरा को वासस्थानमा मा stuffiness को भावना।
Cockroaches संग घर को सफाई प्रदर्शन गरिब स्वास्थ्य गर्दा।
बाटो गरेर, एलर्जी ककरोच को कुनै पनि प्रकारको हुन सक्छ। कीराहरू र त्यसपछि को फोटो को कुरा के एक बिरामी-घृणा, ट्रिगर "सामना गर्न एउटा बैठक अनुहार!" र हामी "familiarity" गम्भीर परिणाम संग fraught छ कि विचार भने, यो अचम्मको मान्छे कुनै पनि हुक प्रयास गर्नुहोस् वा Crook द्वारा अनावश्यक छिमेकी को छुटकारा प्राप्त गर्न छ।
तपाईं परिसर स्वच्छता को सरल नियमहरू भने तपाईं दूर प्राप्त गर्न सक्छन्:
को सेनेटरी उपकरण को निष्ठा जाँच गर्नुहोस्।
समयमै धुने भाँडा र विशेष ठाउँमा यो राख्नुहोस्।
सधैं आफ्नो ठहराव रोकन, घर बाहिर फोहोर।
तिनीहरूले कीराहरू रुचि थिएनन् भनेर फोहोर को एक बाल्टिन, hermetically छाप गर्नुपर्छ।
यी सरल निर्देशन घरमा किरा को घटना रोक्न मद्दत गर्नेछ र expulsion पछि आफ्नो फिर्ती बारम्बार जोगिन।
जहाँ Cockroaches लुकाउने
कुनै सजिलो कार्य - धेरै एक ककरोच को उपस्थिति थाहा छ, तर यो पाउन। सामान्यतया हामी कीरा पहिले नै हाम्रो घरमा को रिक्त स्थान मा सजिलो महसुस हुँदा एक समयमा आफ्नो उपस्थिति को थाहा र तिनीहरूले फोहोर कुराहरू धेरै गर्छन्। परिसर मालिक उहाँले सरल निर्देशन पालना गर्नु अघि अप्रिय छिमेकी सिक्न चाहन्छ भने तपाईं habitats घुसपैठियों फेला पार्न मद्दत गर्न।
पहिलो, ककरोच को लगभग कुनै पनि प्रकारको गाढा फोहोर ठाउँमा प्रेम गर्नुहुन्छ। अरू सबै कुरा को लागि को रूप मा, Cockroaches उपस्थिति को मुख्य संकेत निम्नानुसार छन्:
टाइल र फर्नीचर देखिने कालो डट्स मा - कीराहरू को excrement;
यो अप्रिय peculiar गन्ध महसुस;
चर्किएको देखिने ककरोच अन्डा।
मालिक सबै यो देख्दा धेरै अवस्थामा छन्, तर यो आफ्नो ध्यान मा बास छैन। सम्म Cockroaches घर वरिपरि चलाउन टोली बन्न छैन यो एक समयको लागि जारी गर्न सक्छन्। हामी विचार अन्तर्गत कीराहरू पनि सानातिना निशान को नजर मा पर्यो भने, त्यसपछि तपाईं निश्चित युद्ध तिनीहरूलाई घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बिर्सनु हुँदैन।
सबै परजीवी लुकाउन सक्छ जो भान्सा, मा दूर tucked ध्यान निरीक्षण भन्ने तथ्यलाई सुरु गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो उपस्थितिको irrefutable प्रमाण फेला यदि सायद, आफ्नो डर पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि राम्ररी खाना कणहरु रहन सक्छ जो भाँडा, बर्तन र अन्य बर्तन, धुन। सबै खाना उत्पादन, आफ्ना आफ्ना Cockroaches बर्बाद कि जाँच गर्न निरीक्षण। किनभने क्षति को मामला मा, तिनीहरूले खाना लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न जारी हुनेछ।
यदि तपाईं फेला को घुसपैठियों "पछि लागि" समाधान गर्न वा कुराहरू आफ्नो मार्ग गरौं बाँकी हुँदैन। हरेक दिन महत्वपूर्ण छ। यो ढिलो तपाईं किरा नष्ट गर्न सुरु, आफ्नो परिवार र घर कम क्षति भएकाहरूले, तपाईं यो क्रूर संघर्ष को विजेता हुनेछ।
अब तपाईंलाई थाहा कसरी Cockroaches धेरै प्रजाति आफ्नो घर मा unwelcome छिमेकी बन्न सक्छ। हामी आशा जानकारी तिमीहरूलाई उपयोगी थियो। आखिर, forewarned - यो forearmed छ!
विवरण hares: जीवन शैली र व्यवहार
यो एक पुतली, एडमिरल जस्तो देखिन्छ?
रूसी वन जनावरहरू
तारकीय जीवनी: Irina Pegova चलचित्र र जीवनमा
पुस्तकालय प्रदर्शनियों नाम। पुस्तकालयको मा पुस्तक प्रदर्शनी
सेप्टेम्बर 14 जन्म ती को विशेषताहरु (राशिफल - कन्या)
"Ursa" (इन्सुलेशन): विशेषताहरु र समीक्षा
रात Owls टाढा, वा प्रारम्भिक ओछ्यानमा जाने कसरी?